Qaabka Shumaca-Pin-Bar Shidaalku waa Astaan faa&#39;iido leh oo lagu kalsoonaan karo | vfxAlert official blog
Nidaamka laambadda Pin-Bar: waa calaamad lagu kalsoonaan karo oo isbeddel isbeddel ah
Sidaad ogtahay, ganacsiga isbeddelka ayaa ah midka ugu faa iidada badan waxaana u isticmaala qof walba: laga bilaabo bilowga ilaa kuwa sameeya suuqyada waaweyn iyo lacagaha deyrka. Laakiin, inkasta oo ay fududahay dibedda, istiraatiijiyaddani waxay leedahay laba dhibaato: in la helo barta uu dhaqdhaqaaq xoog leh ka bilaabmayo iyo, ka sii muhiimsan, in la go'aamiyo daqiiqadda ay dhammaanayso. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida ganacsiga laba-geesoodka ah loola socdo qaabka Pin-Bar, macaash ku qaadatid waqtiga ama la furo ganacsi ka-hor-imaad ah.
Qaabkani waa qayb ka mid ah habka Waxqabadka Qiimaha, kaas oo loo qoondeeyay inuu yahay horumarin dheeraad ah ee falanqaynta shumaca. Waa cadaalad in la dhaho ma cada gabi ahaanba waxa «horumarinta» ah oo aan ka aheyn magac bedelida moodooyinka sawirada caadiga ah. Isla Pin-Bar waa mid ka mid ah kiisaska gaarka ah ee «Doji» - shumacyo leh jidh yar ama maqan iyo hooskii dhaadheer. Doji sidoo kale waa astaan dib u noqosho iyo mabaadi'da horumarinteeda si guul leh ayaa loogu adeegsan karaa Qiimaha Waxqabadka.
Waxaan dhihi karnaa in Price Action ay tahay hab, ma ahan nidaam ganacsi oo leh sharciyo cad. Ganacsade ayaa u adeegsan kara iskudarka calaamadaha binary ee bilaashka ah ama istiraatiijiyad tilmaame. Sida ficilku muujiyey, waxaad ku guuleysan kartaa illaa 30% koror celceliska faa'iidada.
Magaca ayaa loo sameeyay sababta oo ah nooca shumaca dhexe oo la mid ah sanka geesiga sheeko-sheeko Pinocchio - kan weyn, kan ugu kalsoonaanta badan. Qaabka Pin-Bar ayaa la sameysan karaa dhamaadka labadaba kor u kac iyo hoos u dhac labadaba. Nooca caadiga ah wuxuu u eg yahay sidan:
Wixii loo yaqaan 'Pin-Bar' in loo tixgeliyo inay sameysmeen; shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo:
• Jidhka laambadda dhexe ayaa maqan ama aan ka badnayn 20% dhererka «sanka» Haddii xaaladdan aan la helin, tusaalaha looma tixgelin inuu sax yahay oo bilowgu waa inuu seegaa calaamadda binary ee nool;
• «Sanka» wuxuu ka sii dheereeyaa «indhaha», laakiin jidhkiisu waa inuu ahaadaa mid gebi ahaanba gudaha ku jira isla markaana ugu dhow sida ugu macquulsan qiimaha la xirayo, taas oo sida ku xusan falanqaynta shumaca caadiga ah loo tixgelinayo «dubbe» «Dubbe rogay» mid haad ah.
Laambadda dhexe ma noqon karto baarka gudaha, dhisme kale oo aasaasi ah oo ah Qiimaha Waxqabadka. Waxaa loo tixgeliyaa qaabka isbeddelka isbeddelka oo kaliya kiisaska dhifka ah waxaa ku xiga iyada oo ka socota adeegga calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah !
• Xiritaanka qaabku marwalba wuxuu kudhow yahay qiimaha furan ama banaanka isha bidix;
• Jaantuska, waxaad ka heli kartaa meelo badan oo ay ku jiraan shumacyo isku eg Pin-Bar, gaar ahaan jadwalka hoose. Xitaa haddii ay "sax yihiin", u dooro meesha laga soo galo kuwa ku dhow:
- Heerarka taageerada / heerarka iska caabinta;
- Qiimo aad u saraysa / hooseeya: usbuuc, bil ama maalin kasta oo leh isbeddel sarreeya;
- Heerarka Fibonacci haddii uu jiro sixitaan ku saabsan isbeddelka weyn;
- Celceliska Dhaqdhaqaaqa, gaar ahaan muddada dheer, tusaale ahaan, 200-maalmood;
- Aagagga ay heerar badani ku yaalliin (isku biiritaanka);
- barta Pivot;
Haddii hoosku aanu dhaafin baarkii hore iyo dhaqdhaqaaqa qiimaha guud sida ku cad shaxanka, markaa waxaan leenahay qaab been ah. Sidaa darteed, waxaan horteenna haysannaa qaab dib-u-celin ah, laakiin dib-u-soo-celin muddo-gaaban ah, ka dib kaas oo isbeddelku sii socday. Isla mar ahaantaana, isku-darka laambadda saxda ah waxay muujineysaa mid sare ama hoose oo cusub oo leh dib-u-noqosho soo socota.
Qaabka beenta ah waxaa loo tixgeliyaa inuu ka khatar badan yahay, waana inaad u isticmaashaa kaliya ganacsiga haddii aad leedahay khibrad kugu filan. Kahor intaadan furin ganacsi, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso jihada isbeddelka dhowr jadwal oo fiiro gaar ah u yeelo oo keliya shamacyada ka muuqda dib-u-celinta iyo sixitaanka.
Marka laga fiiriyo xaalada suuqa, Pin-Bar wuxuu soo baxayaa marka ciyaartooyda waaweyni ay go'aan ka gaaraan hal dhaqdhaqaaq fiiqan si ay u tuuraan kuwa yaryar «hoos u rida» meelahooda dhamaadka isbeddelka Tani waa sababta loo yaqaan «sanka» dheer marka kororka baaxadda leh ee mugga suuqa uu si ku-meelgaar ah suuqa uga dhaqaajiyo dhammaadka filimka. Sidoo kale, si la mid ah kuwa sameeya suuqa «jillaab» amarradooda la sugayo haddii qiimaha uusan gaarin heerka xisaabinta ka hor dib u celinta.
Laba ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Ikhtiyaarka waa la furi karaa ka dib marka la xiro sanka, laakiin way fiicantahay in la sugo illaa inta qaabku si buuxda u sameysmayo. Sidaa darteed, waxaan sugeynaa dib u soo celin dhameystiran iyo isbeddelka ku socda jihada saxda ah. Tusaale istiraatiijiyad binary.com oo leh qaabka Pin-Bar:
Heerka furitaanka ikhtiyaariga ah waxaa lagugula talinayaa inuu ahaado 5-7 dhibcood oo ka sareeya / ka hooseeya bilowga "sanka" si looga ilaaliyo buuqa suuqa waqtiga sixitaanka. Waqtiga dhicitaanku waa ugu yaraan 3-5 shumacyo waqtiga shaqada, waxaan eegeynaa xaaladda suuqa. Kadib furitaanka ganacsi, waxaa muhiim ah in si sax ah looga baxo hadii dillaalku kuu ogolaado inaad xirato ikhtiyaarka kahor inta uusan dhicin. Waa inaad raacdaa qawaaniinta qasabka ah ee ku saabsan qalab kasta oo ganacsi iyo calaamadaha ganacsiga binary:
• Qaabka loo yaqaan 'Pin-Bar' ama isku-darka laambadda ee la midka ah ayaa u muuqda marar badan waxaadna u baahan tahay inaad doorato oo keliya kuwa ugu kalsoonida badan ee ganacsiga, tusaale ahaan kuwa ku dhow heerarka qiimaha ee muhiimka ah: Fibonacci, sare / hoos udhac, dhaqaaqista Isgoyska Celceliska, burburka soohdimaha tilmaamayaasha kanaalka.
• Qiimaha dhif ah (oo aan ka badnayn 10% kiisaska) wuxuu sii wadaa inuu u dhaqaaqo dhanka sanka, kana soo horjeedka ikhtiyaarka furan. Haddii ay suurogal tahay, xiro ikhtiyaarka ama sug dhicitaanka, dib u laabasho deg deg ah ayaa suurtagal ah. Ha furin ganacsi labaad oo kaa soo horjeeda, shucuurtaada xakamee!
Markuu dhaqdhaqaaqu kobco, waxaan bilaabaynaa qayb faa'iido qaadasho ah. Suurtagal ma ahan in si dhab ah loo ogaado inta ay isbeddelku socon doono, gaar ahaan haddii ay jiraan dhacdooyin muhiim ah oo soo socda. Sidoo kale, dib u noqoshada qiimaha ayaa laga yaabaa inaanay isla markiiba bilaaban - ka dib markii la xiro isha midig, dhowr shumacyo ayaa laga yaabaa inay dhaafaan kahor inta uusan u dhaqaaqin qiimaha jihada. Sidaa darteed, waxaan u kala qaybinaynaa mugga xulashooyinka qaybo 3-4 ah oo leh taariikho dhicitaan oo kala duwan oo aan xirno sida ugu dhakhsaha badan.
Xeeladdan ayaa noo oggolaaneysa inaan ka saarno culeyska nafsaaniga ah ee aan loo baahnayn tan iyo markii aan ku sii jirno faa'iidada xitaa iyadoo aan la saadaalin karin isbeddel xagga dambe ah Haddii qiimaha, liddi ku ah, uu ku sii socdo jihada saxda ah, waxaad isku dayi kartaa inaad ku darto ikhtiyaar qiimaha hadda jira si aad u hesho faa'iido weyn, laakiin tani waa kaliya haddii aad khibrad u leedahay calaamadaha binary ee bilaashka ah. Newbie's waa inay faa'iido ku qaataan calaamadaha ugu horreeya ee isbeddelka dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha!
• Saamiga jirka ee shumaca "sanka" ilaa dhererkiisa . Labada lammaane kasta waxay leeyihiin celcelis ahaan dhererkooda sababtoo ah isbeddelka iyo guud ahaan suuq geynta suuqa. Haddii aad sugto "san dheer" oo asal ahaan aysan ahaan karin, dhibco wanaagsan oo laga soo galo ayaa la waayi doonaa;
• Dhererka ugu yar ee sanka oo leh jirka shumaca . Tani waxay khuseysaa suuq dhinac ah iyo muddo hoos u dhaca isbeddellada. Xaaladdan oo kale, celceliska dhererka shumacyada ayaa hoos u dhacaya oo ma ogaan kartid meesha laga soo galayo xitaa marinka ballaaran. Laakiin haddii aad raacdo sanka yar, waa wax aad u macquul ah in lagu garto Pin-bar rajo leh oo ku yaal suuqa xasilloon;
• Meelku waa sanka marka loo eego isha bidix . Sanka caadiga ahi waa inuu gebi ahaanba ku jiraa gudaha laambadda bidix, laakiin tani waa ikhtiyaari. Suuqa dhif ayaa siiya calaamadaha ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah taasna waxaa lagu arki karaa sawirka kore, laakiin horumarku wuxuu ku socdaa jihada saxda ah xaalad walbana waxaad ubaahantahay in lagugu hago khibrad iyo xaqiijin tilmaamayaasha kale;
• Dhererka shumaca bidix . Jaleecada hore, tani uma qalanto in fiiro gaar ah la siiyo, laakiin maahan. Markuu suuqu u dhaqaaqo dareenno fara badan oo dhinacyo badan leh, ku dhowaad dhammaan shumacyada waxay leeyihiin hoosad dhaadheer oo muuqaal ahaan way adag tahay in la arko qaabka ka dambeeya "kayntan" xitaa isha weyn ee bidix waxay u muuqataa mid yar. Yaraynta celceliska dhererka ayaa xaliya dhibaatada;
Aan soo koobno . Nidaamka laambadda Pin-Bar waa calaamad faa'iido leh oo lagu kalsoonaan karo oo ah habka Waxqabadka Qiimaha ee istiraatiijiyad kasta oo binary.com ah. Laakiin waxaa jira dib-u-dhac - waxaa si sax ah looga shaqeeyaa oo keliya da'da (laga bilaabo hal saac ama ka badan) waqtiyada, taas oo, si kadis ah, u tahay mid caadi u ah dhammaan isku-darka laambadda iyo tilmaamayaasha farsamada. Sidoo kale, iskudhafka habboon waa dhif iyo wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah iyo shaandhaynta calaamadaha beenta ah.